Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir, ayaa waxaa ka dhacay qarax gaari lagu soo xiray – STAR FM SOMALIA
Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir, ayaa waxaa ka dhacay qarax gaari lagu soo xiray
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir, ayaa sheegaya in saaka aroortii qarax jugtiisa si aad ah looga maqlay Magaalada Muqdisho inuu halkaasi ka dhacay.
Qaraxaan ayaa dadka deegaanka waxa ay inoo sheegeen inuu ahaa mid lagu xiray gaari yar oo nooca raaxada ah, kadibna la qarxiyay, xilliga Baabuurka la qarxinaayay ayaa waxaa baabuurka ka degtay ninkii waday oo qaraxa lala damacsanaa.
Ugu yaraan labo ruux oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay Qaraxaasi, kuwaasi oo ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay, lama soo sheegin wax dhimasho ah oo Qaraxa ka dhashay.
Ninka Baabuurkiisa la qarxiyay ayaa la sheegay inuu ka shaqeeyo Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, waxaana magaciisa lagu soo koobay Jaarlees.
Ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa Hay’adda Nabad Suggida ayaa tagay goobta qaraxa uu ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka wada baaritaan.
Qaraxyada gaadiidka lagu xiro iyo dilalka qorsheysan ayaa ku soo badanaya Magaalada Muqdisho, xilli Dowladda Federalka Somaliya ay ku dhawaaqday in Magaalada laga sameynaayo howlgalo guri guri ah.
Waxaa lagu wadaa in ay gaaraan maanta magaalada kismaayo madaxda maamul gobaleedyada iyo madaxada DFS
Magaalada Jowhar ayaa todobaadkan ku jirta diyaar garowgii u dambeeyay ee shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe(Daawo Sawirada)